China Diosgenin bvisa vagadziri uye vanotengesa | HEX
Inodaidzwa kuti "mushonga wegoridhe" mune yekurapa. Diosgenin chinhu chakakosha chakasarudzika zvigadzirwa zvekugadzirwa kwemahomoni eSteroid. Steroid mahormone ane yakasimba anti-hutachiona, anti-allergies, anti-hutachiona uye anti-kuvhunduka kwemasipikisi mhedzisiro, kurapa kweiyo rheumatism, yemoyo, lymphoblastic leukemia, cellular encephalitis, zvirwere zveganda, anti-bundu uye varwere vakakosha kwekushandisa kwakakosha kwe zvinodhaka; Icho chinhu chakasvibirira chepamuviri Ketenolone Acetate, inova yakakosha yepakati steroid steroid madhiragi. Inogona kushandiswa kugadzira cortisol, prednisone, norethisterone, dermatolysis, dexamethasone, nezvimwe.
Pashure: Kubvisa kweRadix Paeoniae Alba
Zvadaro: Cranberry yakabudiswa